Isebenzisa umshini wezinso Peritoneal ekwelapheni izinso izifo
isebenzisa umshini wezinso Peritoneal - ingenye indlela yokwelashwa esikhundleni nge kahle umsebenzi kwezinso. Isimiso yalolu hlobo yokuyelapha ukwanda okusheshayo kanye exchange of izinto ephansi yamangqamuzana maphakathi ne liquid ngokusebenzisa ulwelwesi abami ngalo ingaphakathi lesisu kanye nezikhungo zayo, igazi, isixazululo ekhethekile is batheleka ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu. Ngokokuqala ngqá a zelashwe yimpumelelo peritoneal lasetshenziswa ngo-1945 for ekwelapheni ukwehluleka oyingozi kwezinso.
Ukuze uqonde ukuthi izinso isebenzisa umshini wezinso, noma kangcono ukuthi zelashwe igazi, odinga ukukwazi izinqubo pathophysiological ezenzeka emzimbeni e izifo nezinso.
isebenzisa umshini wezinso Peritoneal isetshenziswa ukwelapha oyingozi futhi nesifo esingamahlalakhona kwezinso.
Izifo esemqoka eziholela ukuthuthukiswa ezingamahlalakhona ukwehluleka kwezinso kukhona glomerulonephritis, pyelonephritis, izifo letindzala ezinso, isifo sikashukela, kombungu esizalweni kohlelo genitourinary, nabanye. Ukwehluleka olunamandla kwenzeka uma izimo ukushaqeka, ezinzima oluhambisana nemfiva, zokugula azoya futhi kuhlinzwa. Kulokhu i- umsebenzi oyisisekelo izinso - excretory futhi nokwenana, ukuze alondoloze umbono olinganiselayo futhi electrolyte ibhalansi. nokugcinwa Fluid kwenzeka futhi ukungcola zazo ngokuvamile excreted ngu izinso kusuka emzimbeni. Ukuze ukuxazulula lesi simo, ngaphezu yokwelapha izidakamizwa, wasebenzisa hemodialysis futhi zelashwe peritoneal, ukusiza ukususa uketshezi ngokweqile kanye ubuthi.
Njengoba kushiwo ngenhla, ngokuyisisekelo zelashwe peritoneal kusekelwe ukudluliswa mshini okusheshayo ubuthi komunye naphakathi kwenye. Kubantu, lezi ezindaweni yisisombululo ekhethekile oyinyumba, ugcwalise isiguli ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu negazi. Ngo hemodialysis, esiqhutshwa ku apharathasi "izinso yokufakelwa", exchange phakathi kwegazi kanye nekhambi kwenzeka ngokusebenzisa zokwenziwa ulwelwesi dialyzer. Futhi isebenzisa umshini wezinso indima peritoneal lokhu ulwelwesi wenza peritoneum yayo (isikhumba ukumboza ingaphakathi lesisu). I peritoneum yikhono umuntu ukuba kudlule mass ezincane-molecule. Slag kusukela egazini, lapho okuqukethwe ukwehluleka kwezinso kuphezulu, ukungena ngokusebenzisa ikhule ezimbotsheni isixazululo, ngenxa umehluko okuhlushwa. Njengoba isixazululo peritoneal yakhiwa glucose ukubunjwa yabo, okuyinto uyakwazi edonsa amanzi, ukususwa ketshezi ngokweqile kwenzeka.
isebenzisa umshini wezinso Peritoneal wenziwa ngokuthi bathele ngalo ingaphakathi peritoneal isixazululo ekhethekile oyinyumba emqulwini ka 2.5 amalitha (umuntu omdala), ngokusebenzisa ipayipi ekhethekile ifakwe kule ingaphakathi peritoneal. Ngemva cishe 5 ketshezi ngehora kusuka ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu amuncekela futhi esikhundleni. I 4-5 shift Kwenziwa emini. Inombolo ukuqhela incike nesineke futhi izinga lokushintshisana umsebenzi peritoneal iyahlolwa by serum-chemistry indices.
Ukukhombisa zelashwe peritoneal?
isebenzisa umshini wezinso Peritoneal wenziwa in iziguli sina isifo senhliziyo, izingane abagulayo nasebekhulile. Njengoba kungaba kwenziwe ngokuzimela yisiguli, kuyafaneleka ukuba iziguli abahlala kude nezikhungo hemodialysis.
Ukufakwa ipayipi phakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu wenziwa esibhedlela, egunjini yokusebenza. ukuqeqeshwa ephakeme Kwenziwa esizimele isiguli inqubo, izinguquko Ukukhetha futhi dialysate. Ngemva cishe 2-3 amasonto isiguli kukhishelwa ekhaya, lapho ngokuzimela wenza zonke manipulations. Isiguli kanye ngenyanga uhambela umnyango isebenzisa umshini wezinso edlulisa izivivinyo edingekayo kanye ukulungiswa izixazululo. Lokhu kusebenza abantu ezingamahlalakhona ukwehluleka kwezinso. Lapho ukwehluleka oyingozi so-renal, isebenzisa umshini wezinso peritoneal wenziwa esibhedlela.
Abantu abaku- isebenzisa umshini wezinso, babe olukhethekile lokudla. Ukudla zelashwe uketshezi ukunciphisa ukusetshenziswa kasawoti (high blood pressure), ukuze kukhawulwe ukusetshenziswa ukudla okunothe potassium (izithelo nemifino) ne phosphorus.
Amylase - kuyini? Norma Amylase egazini
Ukuhlaziya progesterone kungasiza ukukhomba imbangela ukungazali kanye kwesisu
Ubuchopho bomuntu: isakhiwo
Impilo ngokomzimba - impilo zabo ezingokomzimba, eveza isimo samanje izitho kanye nezinhlelo zomzimba womuntu
Kobuso massage nezinkezo: zobuqili imfihlakalo Cutlery
Indlela yokugcoba izinwele ezandleni
"Novice wayeyiqhawe romantic" - indaba inkondlo Lermontov sika
Rover "Volvo-Laplander» (Volvo Laplander C303): ezibekiweko lobuchwepheshe
Ukugcwalisa imigodi yamazinyo: izindlela kanye nezinto zokwakha
Pronskiy isitshalo - yindawo lapho izinga iziphuzo zenziwa
Patrick Süskind, "Perfume": isifinyezo
Analogs "Novopassita". "Novopassit": yokusetshenziswa, analogs, ukubuyekezwa kanye ukudedela ifomu
I izindawo ethandwa kakhulu e-Thailand
Ukufakelwa amashiya: incazelo izinqubo kanye nokubuyekeza
Eurobonds - kuyini? Bani khiqiza nalokho okudingekayo eurobonds?
Umshini Stitch: Ukwahlukanisa kanye nokusebenza ubuchwepheshe
Machine "eziyisishiyagalombili", Vaz 2108